ဗဟို နှင့် တောင်အာရှ ကြားတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံ
ဤဆောင်းပါးကို ဝီကီစံနှင့် ကိုက်ညီစေရန် ပြင်ဆင်တည်းဖြတ်ရန် လိုအပ်နေသည်။ အကယ်၍သင်ပြင်ဆင်နိုင်ပါက ဤဆောင်းပါးအား တိုးတက်စေရန် ကျေးဇူးပြု၍ ပြင်ဆင်ပေးပါ။ ဆွေးနွေးချက် စာမျက်နှာတွင် အကြံပေးမှုများ ပါဝင်လိမ့်မည်။(29 Jul 2021)
د افغانستان اسلامي امارت (ပက်ရှ်တွန်း)
ဆောင်ပုဒ်: لا إله إلا الله، محمد رسول الله
နိုင်ငံတော် သီချင်း: Millī Surūd
33°N 65°E﻿ / ﻿33°N 65°E﻿ / 33; 65ကိုဩဒိနိတ်: 33°N 65°E﻿ / ﻿33°N 65°E﻿ / 33; 65
ဒါရီပါရှား 27 million (77%) (L1 + L2), ပက်ရှ်တို 16.8 million (48%)
၉၉.၇% အစ္စလာမ် (တရားဝင်)
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ Islamic republic
၁၉ ဩဂုတ် ၁၉၁၉
၉ ဇွန် ၁၉၂၆
၁၇ ဇူလိုင် ၁၉၇၃
၂၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၄
၆၅၂,၂၃၀ km2 (၂၅၁,၈၃၀ sq mi) (အဆင့်: ၄၀)
၃၂,၂၂၅,၅၆၀ (အဆင့် - ၄၄)
၄၆/km2 (၁၁၉.၁/sq mi) (အဆင့် - ၁၇၄)
$72.911 billion (အဆင့် - ၉၆)
$2,024 (အဆင့် - ၁၆၉)
$21.657 billion (အဆင့် - ၁၁၁)
$493 (အဆင့် - ၁၇၇)
နိမ့် · ၁
၁၉၇၀နှောင်းပိုင်းမှစ၍ ပြည်ပနိုင်ငံများ၏ ဝင်ရောက် ကျူးကျော်ခြင်းများကို ဆက်တိုက်ခံနေရသည်။ ၁၉၇၉တွင် ဆိုဗီယက်တို့ ကျူးကျော်ပြီး၊ ၂၀၀၁ခုနှစ်တွင် အစွန်းရောက် တာလီဘန်အစိုးရကို ဖြုတ်ချရန် အမေရိကန်ဦးဆောင်သော နေတိုးတပ်များ၏ ဝင်ရောက် ကျူးကျော်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၂၀၀၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် ကာဇိုင်းအစိုးရကို အကူအညီပေးရန် ကုလသမဂ္ဂ လုံခြုံရေးကောင်စီမှ နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးရေးနှင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ (International Security Assistance Force (ISAF)) ကို တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။  တာလီဘန်တို့ကို တိုက်ခိုက်နေရသောကြောင့် တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးအောင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် နှောင့်နှေးလျက် ရှိသည်။ 
နိုင်ငံပြည်ပ ကုန်သွယ်လမ်းကြောင်းများမှာ ပါးရှား(အီရန်)နိုင်ငံ မီရှက်မြို့မှ အာဖဂနိစတန်နိုင်ငံအတွင်းရှိ ဟဲရတ်မြို့သို့ တစ်လမ်း၊ ဗူခါရာမြို့မှ ကဗူးမြို့သို့ တစ်လမ်းရှိသည်။ အရှေ့ တာကီစတန်ရှိ ဒက်ရှန်မြို့နှင့် ကဖာရီစတန်မြို့တို့မှ ကဗူးမြို့ သို့လည်း လမ်းပေါက်သည်။ ပါကစ္စတန်နှင့် အာဖဂနိစတန်တို့အကြား ကူသန်းသွားလာရာတွင် မြောက်ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်း ရှိ ပေ ၂ဝဝဝဝ ကျော်မြင့်သော တောင်ရိုးတောင်တန်းများရှိ တောင်ကြားလမ်းများကို ဖြတ်ကျော်ရသည်။ အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ ကိုင်ဗာတောင်ကြားလမ်းအားဖြင့် ပက်ရှဝါ နှင့် ကဗူးမြို့တို့ ကို ဆက်သွယ်ရသည်။ တောင်ပိုင်းတွင် ကိုဂျက်၊ ဗိုလန်၊ ဆီဗီတောင်ကြားလမ်းများအားဖြင့် ကန္ဒဟာမြို့သို့ ရောက်နိုင်သည်။ ဂိုမယ်၊ တိုချီ၊ ကူးရန်တောင်ကြားလမ်းများအားဖြင့်လည်း ကန္ဒဟာမြို့သို့ ရောက်နိုင်သည်။ အာဖဂနိစတန်နိုင်ငံကို ရှေးရှေးက အာရိယနဟုလည်း ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ အာဖဂန်လူမျိုးတို့၏ တိုင်းပြည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည့် အာဖဂနိစတန်ဟူသော အမည်သည် ကမ္ဘာအသိ အမှတ်ပြုအမည် ဖြစ်သော်လည်း အာဖဂလူမျိုးတို့ ကိုယ်တိုင်ကမူ ထိုအမည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်သုံးနှုန်းမှု နည်းလှသည်။ ရှေးအာဖဂန် သမိုင်းဆရာ ကြီးများကမူ အာဖဂန်လူမျိုးတို့ကို ဗင်း-အီ-အစ္စရေ (ဣသရေလ အဆက်အနွယ်များ)ဟု ခေါ်ဝေါ် သုံးနှုန်း သည်။ ၎င်းတို့က တလွတ်ဟု ခေါ်သော ဣသရေဘုရင် ဆော်လမွန်၏ မြေးတော်တစ်ဦးဟု ဆိုသူ အာဖဂန္နာမှ ဆင်းသက်သည်ဟု အယူရှိခဲ့ကြသောကြောင့်ပေတည်း။ ယခု အာဖဂန်လူမျိုးဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်းခံရသူတို့က ယင်းတို့ကိုယ်ကို ယင်းတို့ ဒျူရနီဟု ဆိုကြသည်။ ထိုဒျူရနီတို့သည် အာဖဂနိစတန်နိုင်ငံကို ကြီးစိုး လွှမ်းမိုးသော လူမျိုးစုဖြစ်၍ အီရန်နှင့် ဆီးမိုက်ကပြားအနွယ်များ ဖြစ်ကြသည်။
ထိုမင်းသည် အာမက်ရှား ဒျူရနီဘွဲ့ကိုယူ၍ အာဖဂနိစတန်နိုင်ငံ၌ ဒျူရနီမင်းဆက်ကို တည်ထောင်သည်။ ထိုကြောင့်အာဖဂနိစတန်၌ စိုးမိုးသော လူမျိုးစုတို့သည် ဒျူရနီအမည်ကို ခံယူကြခြင်း ဖြစ်လေသည်။ အာမက်ရှားဘုရင်သည် မိမိ၏နိုင်ငံကို အရှေ့ဘက်သို့ ပန်ဂျပ်နှင့် ကသ္မီရတိုင်အောင်လည်းကောင်း၊ အနောက်ဘက်သို့ ကက်စပျန်ပင်လယ်အထိလည်းကောင်း တိုးချဲ့၍ မြောက်ဘက်နယ်နိမိတ်အဖြစ် အမူးဒါရယားမြစ်ကို သတ်မှတ်ခဲ့လေသည်။ ထိုအချိန်ပိုင်းလောက်မှစ၍ ပါးရှားနိုင်ငံအပြင် ဂရိတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံနှင့် ဆိုဗီယက် ရုရှနိုင်ငံတို့သည်လည်း အာဖဂနိစတန်နိုင်ငံကို မျက်စောင်းထိုးလာကြသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မိမိတို့၏အကျိုးကို အာဖဂနိစတန်နိုင်ငံမှ တစ်ဆင့် ထိပါးနိုင်သဖြင့် ဂရိတ်ဗြိတိန်သည် အာဖနိဂတန်နိုင်ငံ၌ ရုရှတို့က မိမိတို့ထက် အရေးပါ အရာ ရောက်သွားမည်ကို အလွန်စိုးရိမ်ခဲ့သည်။ ထို့ပြင် ဥရောပ၌လည်း နပိုလီယန် စခန်းထချိန်ဖြစ်၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရေးအတွက် ဂရိတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံသည် ရင်မအေး နိုင်အောင်ဖြစ်ကာ အိန္ဒိယနိုင်ငံကို တိုက်ခိုက်နိုင်ရန် ခြေကုပ်စခန်းကောင်းဖြစ်သော အာဖနိဂတန်နိုင်ငံကို ချော့မရသည့်အခါ ခြိမ်းခြောက်သည်။ ယင်းသို့ဖြင့် ဗြိတိန်နှင့် အာဖနိဂတန်နိုင်ငံ တို့သည် ၁၈၃၉-၄၃ ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ်၊ ၁၈၇၈-၇၉ ခုနှစ်တွင်တစ်ကြိမ် စစ်ခင်းခဲ့လေသည်။ ရုရှနိုင်ငံသည် တာကီစတန်ကို သိမ်းပိုက်၍ အမူးဒါရယားမြစ်၏ တောင်ဘက်တိုင်အောင် ရုရှ စစ်တပ်များ ဝင်ရောက်ခဲ့သော်လည်း အာဖဂနိစတန်ကို ထိပါးတိုက်ခိုက်ခြင်း မပြုခဲ့ပေ။ တစ်ဆဲ့ကိုးရာစုနှစ်အတွင်း အာဖဂနိစတန်နိုင်ငံ၏ အခြေအနေသည် မတည်ငြိမ်ခဲ့ပေ။
၁၉၄၆ ခုတွင် ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာသည်။ နေတိုးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်၊ ကနေဒါ၊ ပြည်ထောင်စုဘုရင့်နိုင်ငံ၊ ဂျာမနီ၊ ဩစတေးလျ၊ တူရကီတို့နှင့် ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၂ ခုတွင် အမေရိကန်နှင့် အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ မဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဘက်သဘောတူညီချက်တွင် လက်မှတ်ထိုးကာ အမေရိကန်၏ နေတိုးမဟုတ်သော အဓိကမဟာမိတ်ဖြစ်လာသည်။ ဂျာမနီနှင့်ဆက်ဆံရေးမှာ အလွန်ကြာလေပြီ။ ဂျာမနီသည် အာဖဂန်နစ္စတန်၏ လွတ်လပ်ရေးကြေညာမှုကို ၁၉၁၉ ခုကပင် အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ လက်နက်ရော စစ်သင်တန်းပါ အကြီးအကျယ်ထောက်ပံ့သူက ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုတည်း။ ချစ်ကြည်ရေးစာချုပ်ကို ၁၉၂၁ က တကြိမ်၊ ၁၉၇၈ ၌ တပြန် နှစ်ကျော့ လက်မှတ်ထိုးဖူးသည်။ အိန္ဒိယသည်လည်း ၁၉၅၀ ပြည့်က အလားတူစာချုပ်မျိုးဖန်တီးကာ လက်တွဲသည်။ ပါကစ္စတန်နှင့်မူ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဆင်မချော။ ဒူရန့်နယ်စပ်မျဉ်းကိစ္စ၊ အာဖဂန်ရှိ လက်နက်ကိုင်တို့အား ပါကစ္စတန်က ထောက်ပံ့နေသည်ဟု ယုံကြည်ရသောအကြောင်း စသဖြင့် ဖြစ်သည်။ သံတမန်ဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သော တရုပ်၊ အီရန်၊ တာဂျစ္စတန်၊ တာ့မန်နစ္စတန်၊ ဥဇဘက်ကစ္စတန်တို့အပြင် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများဖြစ်သည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ဂျပန်၊ ကာဇက်စတန်၊ နီပေါ၊ ရုရှား၊ တောင်ကိုရီးယား၊ အာရပ်ပြည်ထောင်စုတို့နှင့် အဆက်အသွယ်ရှိသည်။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အခြားနိုင်ငံများနှင့်လည်း သံတမန်ဆက်ဆံရေးတိုးတက်အောင် ဆက်လုပ်နေသည်။
အာဖဂန်စစ်တပ်သည် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်တွင် ရှိပြီး အာဖဂန်လေတပ်၊ အာဖဂန်အမျိုးသားတပ်မတော်တို့ဖြင့် ဖွဲ့ထားသည်။ အာဖဂန်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်သည် အာဖဂန်စစ်တပ်အတွက် စစ်ဘက်ပညာများ အဓိကပို့ချရာဖြစ်ပြီး အာဖဂန်အမျိုးသားစစ်ဘက်တက္ကသိုလ်သည် ယင်းကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်ဝင်း၌ပင် ရှိလေသည်။
ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သော အာဖဂန်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့တွင် တာဝန်ရှိသည်။ ၎င်းတွင် အာဖဂန်ဝတ်စုံပြည့်ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် အာဖဂန်နယ်ခြားစောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟူ၍ ဌာနခွဲ ၂ ခု ရှိသည်။ ဝတ်စုံပြည့်ရဲတပ်ဖွဲ့၏ တာဝန်မှာ အာဖဂန်ပြည်သူတို့အား ဥပဒေဆိုင်ရာ လုံခြုံမှုပေးရန်၊ ရာဇဝတ်မှုများကို တားဆီးရန်နှင့် ပုဂ္ဂလိက အစိုးရပိုင်ပစ္စည်းများကို စောင့်ရှောက်ရန်တည်း။ နယ်ခြားစောင့်တို့အလုပ်မှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် မိမိတို့ပိုင်နက်အကြား လုံခြုံရေးယူရန်နှင့် စည်းကြပ်ရန်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တို့ကိုလည်း နယ်ခြားစောင့်တပ်များက လုံခြုံရေးယူသည်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးအောက်ရှိ အာဖဂန်နစ္စတန်၏ ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီသည် လုံခြုံရေးကိစ္စများအတွက် အာဖဂန်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပေါင်းလုပ်သည်။ လက်တလောကာလ၌ စစ်ရေးကိစ္စ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များနှင့်စပ်ဆိုင်သောလုပ်ရပ်တို့ကြောင့် အာဖဂန်နစ္စတန်၏ နေရာအများတွင် စိတ်ချရမှု မရှိ။ ပြန်ပေးဆွဲခြင်းနှင့် လုယက်ခြင်းမှာ မြို့ကြီးများတွင်ပင် ပုံမှန်ကိစ္စသို့ ဖြစ်နေသည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်သည် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ထိပ်တန်း ဘိန်းထုတ်နိုင်ငံလည်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ရှိ ဘိန်းပင်စိုက်ပျိုးမှု၏ ၉၀% မှာ အာဖဂန်နစ္စတန်တွင်ဖြစ်ပြီး ဥရောပသို့သွင်းသောဘိန်းတို့၏ ၉၅% မှာလည်း အာဖဂန်နစ္စတန်မှပင်တည်း။ မူးယစ်တိုက်ဖျက်ရေးဝန်ကြီးဌာနအနေဖြင့် တရားမဝင်မူးယစ်ဆေးဈေးကွက်ကို စောင့်ကြည့်ဖြိုခွင်းရန် တာဝန်ရှိပေသည်။
ကိုးကား အမှား - <ref> tag with name "fn1" defined in <references> is not used in prior text.
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named AO
↑ South Asia :: Afghanistan – the World Factbook – Central Intelligence Agency။ 29 April 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ The Constitution of Afghanistan။ 29 August 2021 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၃ ဇွန် ၂၀၂၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named LoC-pdf
↑ Constitution of Afghanistan (2004)။ 20 September 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Afghan | meaning in the Cambridge English Dictionary။ the Cambridge English Dictionary။ ISBN 9781107660151။
↑ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Factbook
↑ Afghan Population Estimates 1398။ Central Statistics Organization (2019)။4June 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 June 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ ၁၁.၃ Afghanistan။ International Monetary Fund။
↑ Human Development Report 2020 The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene (PDF)။ United Nations Development Programme။ 15 December 2020။ pp. 343–346။ ISBN 978-92-1-126442-5။ ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Baxter၊ Craig (1997)။ Chapter 1. Historical Setting။ Library of Congress Country Studies on Afghanistan။ 13 December 2012 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2010-06-24 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ D. Balland (2010)။ "AFGHANISTAN x. Political History"။ Encyclopædia Iranica (Encyclopædia Iranica Online ed.)။ Columbia University။ 8 December 2010 တွင် မူရင်း အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။5December 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ&oldid=744381" မှ ရယူရန်
၂၂ မေ ၂၀၂၂၊ ၂၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ မေ ၂၀၂၂၊ ၂၃:၄၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။